Xarunta cilmi-baarista hidde-abuurka-DNA | LIFE PICKER - 2018
Xarunta cilmi-baarista hidde-abuurka-DNA
Lab-DNA Xarunta Cilmi-baadhista Cilmi-baarista waxay bixisaa adeegyo badan oo la xiriira baaritaanka DNA-da dadka ujeedooyin kala duwan. Bogga rasmiga ah ee shaybaarka Waxaad ku ogaan kartaa qiimaha iyo liiska buuxa ee adeegyada, oo ay ka mid yihiin in ka badan imtixaannada 40 ee toddoba meelood.
Marka lagu daro go'aaminta aabanimada, hooyada iyo qaraabada ee heerarka kala duwan, falanqaynta waxaa lagu sameeyaa shaybaarka la xiriira meelaha kale ee muhiimka ah ee nolosheena.
Tusaale ahaan, waxaa jira baaritaan lagu dhidbo aabanimo, jinsi ilmo ama is-beddel ku yimaada koromosoomyada uur-ku-jirta xilliga uurka. Waxaa habboon in la ogaado in baaritaanada neefsiga waxaa lagu sameeyaa iyada oo la adeegsanayo baaritaanka dhiigga hooyada iyada oo aan waxqabadyo kale laga helin jirka oo ay ka saxan yihiin baaritaanka qorshaysan.
Shaybaarka ayaa sidoo kale samaynaya aqoonsiga hiddesidaha unugyada ama cudurada kala duwan. Tani waa onkologi ama cuduro kale oo dhif ah oo laga qaadi karo. Waxaa sidoo kale la sameeyaa imtixaannada daroogada ee daroogada.
Xaruntu waxay cilmi baaris ku samaysaa go'aaminta jinsiyada, qowmiyadda, jilitaanka ama abtiriska ee xarumaha aabaha ama hooyada.
Isticmaalka baaritaanka DNA wuxuu xitaa hagaajin karaa tayada nolosha. Tusaale ahaan, si loo go'aamiyo saadaalinta cayaar gaar ah. Daraasadan waxaa loo qabtaa dadka waaweyn iyo carruurta. Iyo baaritaanka carruurta sidoo kale waxaa ku jira talooyin ku saabsan nafaqada.
Dumarku waxay xiiseynayaan baaritaanka, taas oo go'aamisa xuruufta maqaarka, kaas oo gacan ka geysan doona sidii loo dooran lahaa siyaabaha ugu waxtarka badan ee daryeelka si loo ilaaliyo dhalinyarada iyo quruxda. Waxaa intaa dheer, waxaa jira baaritaan kaa caawin doona in la go'aamiyo caafimaadka ugu fiicnaanta iyo cuntada ugu fiican, iyo sidoo kale heerka dhaqdhaqaaqa jirka.
Ugu dambeyntii, waxaanu xusuusneynaa in dhammaan falanqaynta ay fuliyaan laba kooxood oo madax-bannaan oo takhasus ah, taas oo damaanad qaadaysa natiijo sax ah. Dalabaad weyn oo loogu talagalay adeegyada xaruntu waxay u oggolaataa siyaasad qumman oo daacad ah.
5 (100%) 1 codka
Maqaalka hore Maqaalka xigta
Sameynta Sameynta: Xaqiiqooyin xiiso leh oo ka socda VIPGOLD
Implantology waxay kaa caawineysaa inaad soo celiso dhoola-gaaga!
Doorashada dhar-galka ilmaha
Ka-hortagga anosognosiya waa tallaabo muhiim ah oo ku saabsan miyir-qabka.
Cinwaankaaga lama daabici doono. Meelaha loo baahan yahay ayaa lagu calaamadeeyay *
Mowduucyada caanka ah
Wabiyadaha ugu dheer dunida - Top 10 (5.0 / 5)
Top-5 lifjhak "maalin shaqo" hooyo weyn (5.0 / 5)
Hooska dhismaha iyo qashinka waaweyn! (5.0 / 5)
Heerka ugu wanaagsan ee 2017 ee sanadka (5.0 / 5)
Heerka ugu wanaagsan 2018 ee sanadka - Top 10 (5.0 / 5)
DDD wax lagu qoro Kuwa ugu xoogan ee adduunka ee 2018 sano
Pohudet.Guru wax lagu qoro Sida loo garaaco guriga cellulite
Stroitelstvo.Guru wax lagu qoro Alaabta dharka ku karsan. Foornada Ceramic - tartan ka baxsan!
Airlines wax lagu qoro Waxaan kuu rajeynayaa joogitaan wacan
Denis wax lagu qoro Cayayaanka ayaa iibsada gaari loo isticmaalo. Sidee loo badbaadiyaa naftaada?
Gool uu dhaliyay daqiiqada tobnaad wuxuu keenay Everton guushii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkii Premier League
Macmiilku wuxuu dilay adeegaha diyaargarowga dheer ee rooti
Kaga sii gudba cirifka Arctic Circle wuxuu dhigay rikoor heerkul ah
Waxaa la soo sheegay dembiyada Ciidamada Qalabka Sida ee ku sugan Donbass: kufsi iyo dil
Ruushka wuxuu ballanqaaday inuu ka jawaabi doono “hababka cabsi gelinta” Polish
Magaalada Moscow, bas ayaa shil ku dhacay: hal iyo badh toban iyo toban dhaawac ah
Maqaalada ugu dambeeyay
Lacag ka amaahda kaarka waa ay ka fududdahay dhawaaq!
Pawnshop "Kopeyka" oo ku taal magaalada Tver - caawimaad lacageed ayaa heli kara qof walba
Sida loo doorto treadmill a. Tilmaanta Waxqabadka
Sida loo xusho baakadaha wax soo saarka cusub
Burgers - keenista burgeriyaasha gurigaaga wanaagsan
Ku saabsan goobta
© 2017-2018 Isticmaalka qalabka goobta ayaa loo ogolyahay oo kaliya iyada oo calaamad u ah xiriirinta firfircoon KA QAADASHO.
Websaydhka macluumaadka KA QAADASHO
192236 Saint-Petersburg Sofiyskaya Street, 8B, dhismaha. 1
email: [Email ilaaliyo]
taleefan: tel / fax: + 7 (812) 627-6922
waqtiga shaqada Isniin-Jimco. from9: 00 ilaa 21: 00